by admin 20-06-30
Waad salaaman tihiin, qof walboo halkan jooga ayaa halkan shacabka u keenaya wax soo saarkii ugu dambeeyay: Ocean Rocking Horse. Faa'iidadeena, amaan laakiin waxay caan ku tahay dadka raadinta xamaasada leh, carruurtu waa ka boodi karaan midba midka kale, tayadiisa ayaa aad ufiican, oo laga sameeyay PE. Waxaan u maleynayaa inay caan ka noqon doonto wadankaaga. Haddii aad rabto inaad ogaato faahfaahin dheeraad ah, waad la diri kartaa ...
Ma ogi sida loogu hawlgalo qalabka ciyaarta carruurta? Tani waa dhibaato soo food saartay macmiil badan oo hadda soo galay ganacsiga. Waxaa jira meherado badan oo macaamiisha ka jawaab celiya oo aan u fiicneyn sida ay u maleynayaan. Xaqiiqdii, kani maahan arin qalab ah. Hadaan doorano maamulayaasha saxda ah ...
Carruurtu waxay jecel yihiin hadiyadda, waa inay noqdaan kuwa aan caruusadaha ku ciyaarin, naqshada xiisaha leh waxay cunugga u keeni kartaa farxad aan dhammaanayn. Qalabka ciyaarta carruurta Qaar ka mid ah saaxiibbada carruurta xiisaha u leh iyo qalabka ciyaarta ee carruurta lagu cayaaro ayaa khatar khatar ah u leh carruurta. Sanad kasta, in kabadan 100,000 oo caruur ah ayaan ahay ...
U diyaar garowga diyaarinta qalcadda qalqalloocan ee carruurta
1. Da'da kooxda Jannada Fort Naughty Fort waa in la go'aamiyaa. Waa dugsi fiican oo ah 0-6 sano jir, ama kaliya u galida kambuyuutarka. 2. Aagagga Nawaaxiga ee loo yaqaan 'Naughty Fort Paradise' ayaa sidoo kale loo arkaa inay fiican tahay. Haddii ay aad u yar tahay, waxay saameyn kartaa dhibaatooyinka ganacsi ee muddada dheer. Waa in si taxaddar leh loo qiimeeyaa ...